Ala nke Mobile na US | Martech Zone
Tuzdee, Machị 11, 2014 Fraịde, Machị 14, 2014 Douglas Karr
Ojiji ekwentị n’etiti ndị ahịa na-arị elu. 74% nke uto dị na smartphones na 79% nke ndị ahịa US na-agagharị na ịzụ ahịa na saịtị na ngwa. Site na 2016 ngwa mkpanaka ga enweta $ 46. Iji chọpụta ihe mgbanwe a dị egwu pụtara maka ụdị ndị na Ngwaọrụ tinye ihe omuma ihe omuma nke gosiputara otu ojiji intaneti eji emeghari ka ndi ahia jiri ihe omuma di na web.
Usablenet ike saịtị mkpanaka na ahụmịhe ọtụtụ maka ndị ahịa karịrị 400 gụnyere ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa kachasị elu n'ụwa, njem na ụdị ọrụ.
Tags: mgbanwe ntụgharịusoro ịzụ ahịa ezumikeemememobile ngwa ọdịnalamobile ahịaweebụ mkpanakaezumike n'onlinentanetmbadamba nkumembadambaoge